Fariimaha jaceylka oo isku soo dhawaya lamanaha inta badan marka hab fican loo qoro…. - iftineducation.com
Fariimaha jaceylka oo isku soo dhawaya lamanaha inta badan marka hab fican loo qoro….
aadan21 / July 11, 2016
iftineducation.com – Dunidan aanu ku nool nahay waxa ay ka aas-aasantay laba ruux oo kala ahaa Adam iyo Hawo ma aysan kala fogeyn oo waxa ay ahaayeen wehel , naftaduna wehel ayay u baahan tahay oo aduunka kuma noolaan karto kali ahaanshiyo.
Markii qalbiga laga maqanyahay ama uu cidlo dareemayo kaliya mabaranayo sida kalinimo loo ahaado ee run ahaantii waxa uu is tusaa marka lamaaneyaal la yahay in aanu hal Hoos nahay oo aan derbiga uga muuqanayno inoogoo hal isku
Waxa kaliya ee aan u baahanahay waa qof iga taxadara ,runta iisheega , gadaashaydana taagnaada taasina waa sida aan u jeclaaday qof adiga oo kale ah waan kuu baahanay waa rajeeyaa in riyadaydu run noqoto , maxaa yeelay adiga ayaa ku jeclaaday.
Naftaydu waxa ay iweydiisaa aaway qofkii aan dugsan lahaa maxaa u jeeceshahay kalinimada , xayeysiin.com. aniga ayaad dhib ii gaysanaysaa ee raadi ruuxii nafta wax laqeybsan lahaa Allaah ayaa kol hore kuu diyaariyay ee fadlan dedaal oo dhaqsiyo ii soo hel nafta rafiiqeeda .
MUUQAAL: Arooska Nimco Dareen Iyo Axmed Weli FURINLE oo Buuq dhaliyey Iyo Reer Hargeisa oo Weeraray Jig-jiga
Raaxada uu Leeyahay Ibta Naaska Hadii qaabkaan loo salaaxo waxa ay u dhigantaa kintirka Ha aqrin hadii aad biyo fudud tahay